အိုင်စီတီရဲ့ ဝါလကင်းလွတ် သီတင်းကျွတ် ဈေးရောင်းပွဲတော် Last Day OFFER ~ The ICT.com.mm Blog
အိုင်စီတီရဲ့ ဝါလကင်းလွတ် သီတင်းကျွတ် ဈေးရောင်းပွဲတော် Last Day OFFER
100% online payment ကို ICT.com.mm အိမ်မှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာနေရင်း လိုအပ်တာလေးတွေကို မှာလိုက်နော် အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါမယ်။
လုပ်ငန်းမှာသုံးဖို့ #DiskStation ကောင်းကောင်းလေးတစ်လုံးကို ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ လိုချင်တယ်ဆိုရင် အိုင်စီတီမှာ Synology တံဆိပ် #Synology NAS DiskStation DX213 2Bay (Diskless) ကို 40%, NAS SurveillanceStation VS240HD (Diskless) ကို 20% နှင့် NAS DiskStation DS1618+6Bay (Diskless) ကို 10% Discount နဲ့ ရောင်းချပေးနေပါတယ်နော်။
သီတင်းကျွတ်ကာလမှာပဲရမယ့်လျှော့ဈေးလေးမို့ မြန်မြန်လေး အော်ဒါတင်ထားလိုက်တော့နော်။ အချိန်မှီသေးတယ်။ အခုပဲ အော်ဒါတင်လိုက်တော့နော်။
#NAS DiskStation #DX213 2Bay (Diskless) » https://bit.ly/3vvV2Q3
#NAS #DiskStation DS1618+6Bay (Diskless) » https://bit.ly/3G4LoJ5
#Synology #NAS #SurveillanceStation VS240HD (Diskless) » https://bit.ly/3DZAMJw
» အိုင်စီတီမှာ ပစ္စည်းတိုင်းအတွက် အပိုထပ်ဆောင်း % ပေးစရာမလိုဘဲ ဘဏ်စနစ်နဲ့ ပေးချေနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးပါရစေ။ #KBZPay,#CBPay, #AYApay, #Onepay, #WavePay, #Bank transfers to #KBZ, #AYA and #CB တို့အပြင် #VISA #Mastercard #Unionpay #MPU တို့ကို လက်ခံပါသည်။
» ငွေသားနဲ့ပေးချေမယ်ဆိုရင် ၅% #Cashback ပြန်အမ်းပေးဦးမှာမို့လို့ အခုပဲ အိုင်စီတီမှာ ဈေးဝယ်လိုက်တော့နော်။
Happy Shopping! Happy Thadingyut Festival!
#ShopICT #Myanmar #Orderonlinenow #thadingyutoffers #ICT #Octoberpromotion #FreeDelivery #Synology #Diskstation
Newer Epic in every way!!! Samsung S21Ultra ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ
Older ခံစားချက်တွေကို သီချင်းဆိုပြီး ဖော်ပြလိုက်ပါ